नेप्सेका सीइओ भन्छन्–‘सेबोनसँग हाम्रो कुनै झगडा छैन, मिलेरै काम गरेका छौ’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले धितोपत्र बोर्डसँग आफूहरुको कुनै झगडा र द्वन्द्व नरहेको दाबी गरेका छन् । बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै साउदले यस्तो दाबी गरेका हुन् । ‘बेला बेलामा पत्रकार साथीहरुले सोध्नुहुन्छ-तपाईहरुको त राम्रो छैन रे नि त ? त्यो राम्रो...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । आज मातातीर्थ औंसी अर्थात आमाको मुहार हेर्ने दिन । दुई शब्दको ‘आमा’ शब्द उच्चारण गर्दै हामीलाई आनन्द लाग्छ । ‘ऐया आमा, ऐया भगवान’ भनी हामी दुखःको बेला पनि नाम पुकार्छौं । उनै आमाका बारेमा हामीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)का प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतसँग भलाकुसारी गरेका छौं । ५० वर्षीय...
अनलाइनको लगइन नदिने ब्रोकरको लाइसेन्स खारेज गर्दै नेप्से !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड दिन आनाकानी गर्ने ब्रोकरहरुको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । ब्रोकरहरुले दुर्नियत राखेर आम लगानीकर्ताहरुले निःशुल्क पाउनुपर्ने युजर नेम र पासवर्ड नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अघिल्लो साता नेप्सेले ५० वटै ब्रोकरलाई...
महाशाखाहरुलाई चुस्त बनाउन नेप्से प्रमुखको सक्रियता, काम र प्रगतिको विवरण माग
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले आफ्नो कार्यालयमा रहेका ५ वटा महाशाखाका प्रमुखहरुलाई योजनासहित कार्यविवरण र प्रगतिविवरणका प्रतिवेदन त्रैमासिक रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । नेप्सेअन्तर्गत रहने प्रत्येक महाशाखाका प्रमुखले अब गर्नुपर्ने काम र...
अर्थसमितिमा झूठ बोले नेप्सेका सीइओले, हालसम्म पनि लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार गर्न पाएनन् !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अनलाइन प्रणालीका विषय र बैंक तथा डिम्याट इन्टीग्रेसनको बिषयमा अर्थसमितिकै बैठकमा झूठ बोलेका छन् । उनले अनलाइन प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण कडी मानिएको बैंक तथा डिम्याट इन्टीग्रेसनको काम भइसकेको र अनलाइन प्रणालीमा कुनै समस्या...
नेप्से प्रमुख साउदलाई हटाउने चलखेल, बहालवाला र पूर्व अर्थमन्त्रीबाट ग्रीन सिग्नल !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पदबाट हटाउने चलखेल सुरु भएको छ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा दृढ देखिएका साउदले पछिल्लो समय कतिपय कम्पनीको विवादको बिषयमा लिएको अडान र बजारका गिरोहहरुप्रति गरेको बेवास्तालाई आधार बनाई संगठित गिरोहले उनलाई...
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज प्रमुख चन्द्रसिंह साउदलाई रोहन शर्माको खुल्लापत्र
सुरुमै एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहें, मदन बहादुर : हरि बहादुर खै त अनलाईन ट्रेडिङ कहिले आउँछ? हरि बहादुर: आउँछ, छिट्टै आउँछ। मदन बहादुर : सँधै आउँछ आउँछ भनेर लगानीकर्ता झुक्याउने काम मात्र गर्ने ? हरि बहादुर : भन्ने बित्तिकै हुन्छ ? आउँछ नि बिस्तारै, अस्ती भर्खर त सेमी अनलाईन आयो अब मोक सुरु हुँदैछ। मदन बहादुर: जेष्टमा आउँछ भन्यौ आएन , श्रावण १ बाट...
‘दुई महिनाभित्र अनलाइन प्रणाली, १५ दिनभित्र मोक कारोबार’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अबको २ महिनाभित्रमा लगानीकर्ताको हातमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली पुर्याइसक्ने उद्घोष गर्दै १५ दिन भित्र मोक कारोबारको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई...
‘प्राथमिक सोसरह दोश्रो बजारका लगानीकर्ताले पनि सुविधा पाउने !’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले केही समयभित्रै प्राथमिक बजार सरह दोश्रो बजारका लगानीकर्ताले पनि सुविधा पाउने दाबी गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगत केही समयको अन्तरालमा प्राथमिक बजार सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका उल्लेख गर्दै...
अवहेलनाको मुद्धा लाग्ने डरले न्यौपाने पछि हटे, साउदले हाजिर गरे
-मनोजबाबु काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हाजिर गर्न रोक्ने नेप्से अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपाने पछि हटेका छन् । अदालतको आदेशविपरीत साउदलाई रोक्दा अदालतको अवहेलनाको मुद्धा पर्ने डरले उनी पछाडि हटेका हुन् । अध्यक्ष न्यौपाने पछाडि हटेसँगै...
काठमाण्डौ । कानूनभन्दा माथिको अभ्यास गर्न खोज्दा दुईतिहाई बहुमतको ओली सरकार विवादको भूमरीमा परेको छ । दुईतिहाईको दम्भ देखाउँदै विधिको शासनमाथि ठाडो चुनौति दिंदै उसले गरेका कतिपय काम विवादास्पद देखिएका छन् । यो क्रममा सरकार आफ्नै कतिपय राम्रा निर्णयमा समेत लामो समय अडिन नसकेको देखिएको छ । खेतीयोग्य जमीन टुक्रा पार्न नदिने उद्देश्यले...